✨Jabulela Ukushona kwelanga kulesi situdiyo sePentfloor✨
Indawo yakho ekahle yokubaleka kanye nekhaya kude nekhaya e-Lagos. Stylish futhi ethokomele. Izindawo zokuhlala e- Ikate Elegushi Lekki Leli fulethi lisitezi sesithathu (ipentfloor) lesakhiwo esisanda kwakhiwa esisezingeni eliphezulu esinokuphepha kwamahora angama-24.
Ifulethi linikezwe izinga eliphezulu futhi lifakwe izinto zokwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo. Jabulela ukulala kwakho okunethezekile embhedeni wabantu ababili ngemicamelo ethambile eyengeziwe, bese uvula amakhethini azenzakalelayo ekuseni ukuze uvumele ukuphuma kwelanga eLagos.
Kukhona ugesi we-24/7.
Igumbi line-55” smart TV exhunywe ku-DSTV ngokubhaliselwe kwe-Premium. Kukhona i-inthanethi ye-WiFi engenamkhawulo okusho ukuthi ungakwazi futhi uphumule futhi ubukele i-Netflix ku-smart TV.
Isitudiyo sinovulandi omncane wokuzilibazisa ngaphandle kodwa kukhona nophahla olungaphandle oluvulekile esitezi esisodwa nesitudiyo.
Khipha izihlalo kanye nokudla okulula futhi ujabulele ukushona kwelanga okuhle!
Kunekhishi lesimanje elivulekile eliqukethe zonke izinsiza zokwenza ukuhlala kwakho kuzizwe usekhaya. Izinto zikagesi zihlanganisa:
- I-hob yegesi engu-5-burner
Ifulethi lilungele izithandani, izihambi eziyedwana, nabahambi bebhizinisi, yakhelwe ukuhlalisa kahle izivakashi ezi-2.
Ifulethi liyibanga le-7min lokuhamba ukusuka kwa-Spar, isitolo esikhulu esikhulu (noma i-hypermarket empeleni), ngakho-ke kuwuhambo olufushane nje ukuthola ama-croissants asanda kubhakwa ngebhulakufesi lakho. I-Shoprite (i-Circle mall) iyibangana nje elifushane (imizuzu emi-5) ukusuka lapho.
Ezinye izindawo ezidumile kuzo zonke phakathi kwemizuzu engu-7 yokuhamba ukusuka efulethini lethu zifaka ibhishi lase-Elegushi, imakethe ye-Lekki Art and Crafts kanye ne-Nike Art Gallery. I-Lekki Conservation Centre ingu-10min ukushayela (ngaphandle kwethrafikhi).
Izivakashi zingasithinta noma nini.